Tafatafa nifanaovana t@ i Gégé Rasamoely | Besorongola
Tafatafa nifanaovana t@ i Gégé Rasamoely
Posted on March 14, 2011 by besorongola
Raha toa ka teo amin’ny sehatrin’ny filalaovana tantara amin’ny onjam-peo no nahalalana azy taloha, dia eo amin’ny tontolon’ny sary mihetsika kosa no mampisongadina azy ankehitriny. Tsy iza izany fa i Gégé Rasamoely. Nifanojo taminy taty avarabaratra taty i Besorongola tamin’ny faran’ny herinandro teo iny ka nanararaotra mba nitafatafa taminy. Toy izao ary ny resadresaka nifanaovana tamin’i Gégé Rasamoely.
Tahiry Besorongola: Teo amin’ny sehatrin’ny filalaovana tantara no nahafantarana an’i Gégé Rasamoely taloha. Ankehitriny anefa toa tsy dia henoheno intsony ianao amin’io sehatra io.
Gégé Rasamoely: Marina tokoa fa tsy dia heno firy intsony ny tenako eo amin’ny sehatrin’ny filalaovana tantara. 3 taona eo eo zay (nanomboka tamin’ny nahamay ny Radio nasionaly Malagasy dia malahelo ny tenako. Kivy sy Malahelo ny tenako mahita ny fahasimban’ny RNM. Tsy zakako ny miditra ao amin’ny RNM ka mahita an’ireo fahasimbany.
Tahiry besorongola: Inona no nahatonga anao nirotsaka teo @ sehatrin’ny sary mihetsika?
Gégé Rasamoely: Tamin’ny taona 2001 dia nantsoin’I Henri Andrienerena sy Germain Andriamanantena ny tenako rehefa nanantontonsa horonan-tsary iray (Vato Mandoro) ry zareo. Nanomboka teo no tena nahalalan’ny olona ahy teo amin’ny tontolon’ny sary mihetsika.
Tahiry Besorogola: I Gégé matetika somary “be vava” zay rehefa milalao sary mihetsika na tantara, misy antony manokana ve?
Gégé Rasamoely: Izay no fomba nitaizana ahy tao amin’ny RNM, sady izay no manavanana ahy kokoa. Kanefa misy fotoana ihany mitana ny anjara toeran’ny ray aman-dreny ny tenako.
Tahiry Besorongola: Inona no manavanana anao kokoa, milalao tantara sa milalao sary mihetsika?
Gégé Rasamoely: Na dia somary sarotrarotra (ianarana ny texte) aza ny milalao azy dia ny sary mihetsika no manavanana ahy kokoa ankehitriny. Efa miditra eo amin’ny sehatrin’ny filalaovana theatre ihany koa ny tenako amin’izao fotoana izao.
Tahiry besorongola: Manao ahoana ny fandraisan’ny mpanjifa ny sary mihetsika Malagasy?
Gégé Rasamoely: Ny cinema Malagasy no anisan’ny mahalafo kapila betsaka indrindra eto Madagasikara. Kanefa kosa tiko ny manamarika fa misy ireo trano mpamokatra raha ny isan’ny kapila lafo no jerena dia miroborobo ry zareo. Aoka anefa tsy ho adino fa akoatran’ny fivarotana kapila dia eo ihany koa ireo “festival” iraisam-pirenena maro samihafa( FIESPACO) izay sehatra afahan’ny sary mihetsika Malagasy misongadina ihany koa. Fa kosa mila fandalinana sy fampiofanana(école de cinema) isika mba afahana miditra tsara amin’io sehatra io.
Tahiry Besorongola: Mahavelona ve ny sary-mihetsika Malagasy?
Gégé Rasamoely: Mahavelona tsara ny cinema Malagasy raha toa ka tsara ny vokatra atolotrao ny mpanjifa. Indrindra fa rehefa mandray anjara amina “festival” ny sary mihetsika novokarinao. Ny horonan-tsary “ Ihorombe” izay anisan’ny nandraisako anjara dia tafiditra tamin’ny festival FESPACO tany Ouagadougo(Burkina Faso) tamin’ny taona 2009.
Tahiry besorongola: Ny hevitrao mikasika ny ady amin’ny piraty.
Gégé Rasamoely: Miandry ny fananganana an’ilay “Brigade special” izay efa nolazaiko fôna isika izao. Io brigade io dia natao manokana isahana ny ady amin’ny piraty. Manaraka izany dia tokony ho sarahana ihany koa ny sary mihetsika sy ny hira. Ka anisan’ny lalana ahatongavna amin’izany ny fananganana ny OM7 (Office Malagasy du 7èm Art). Io OM7 io dia ivondronan’ny mpanatontosa sary mihetsika, mpilalao sy izay rehetra voakasika izany.
Tahiry besorongola: Hafatrao ho an’ny mpankafy kanto Malagasy rehetra.
Gégé Rasamoely: Samy manana ny zavatra tiny ny tsirairay. Ary arakin’ny efa nolazaiko tetsy ambony dia ny cinema Malagasy no anisan’ny mahalafo kapila betsaka indrindra eto Madagasikara. Kanefa mbola mila ezaka maro ( fandalinana, fananganana école de cinema, fampiofanana) ny tontolon’ny sary mihetsika Malagasy.
Isaorana I Gégé Rasamoely nanaiky nitafatafa tamin’I Besorongola.
← Antsiranana: the place where i am living….